राउटेको सुहागरात मनाउने तरिका सुन्दा अचम्म मान्नुहुनेछ – aajnepal
HomeRochakराउटेको सुहागरात मनाउने तरिका सुन्दा अचम्म मान्नुहुनेछ
सुहागरात के हो कसरि मनाउछन त्यो त बिहे नगरेका मानिसहरुलाई पक्का पनि थाहा हुने कुरो भएन तर बिहे हुने हरुले पनि खासै राम्रो संग त अहिले कसलाई सुनाउछन र त्यो त व्यक्तिगत कुरा भैहाल्यो तर आज हामीहरु हजुर लाइ एक नेपालको दुर्लव जाति जंगल मा बसोबास गर्ने जाति राउटे हरुको सुहागरात को बारेमा जानकारी दिन गैरहेका छौ कसरि कहाँ र कहिले माउनेछं त राउटेहरुले सुहागरात ? सबै कौतुहलताको समधान आज हुनेछ |
राउटेहरुले सुहागरात कसरि मनाउछन थाहा छ .? थाहा पाउदा भइन्छ चकित : जीवन मा बिवाह एकपटक गर्नु पर्दछ बिवाह गरिसकेपछि को पहिलो दिन अर्थात सुरुको रात लाई सुहागरात भनिन्छ ! सुहागरात परम्परा देखि नै आएको चलन हो यो जाति अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ ! बिवाह गरिसके पछि को नया जीवन साथि संग को पहिलो रात नै सुहागरात हो तर राउटेहरूले सुहागरात कसरि मनाउछन त भन्ने बारेमा धेरै लाई थाहा नहुन सक्छ ! आज हामि कुरा गर्दैछौ राउटेहरुले सुहागरात कसरि मनाउछन त भन्ने बारेमा थाहा नभएको लाई अचम्म लाग्न सक्छ ! कसरि मनाउछन भन्ने कुरा को जिज्ञासा सबैको मन मा आउनु स्वाभाविक हो पढ्नुहोस कसरि मनाउछन राउटेहरुले सुहागरात !
सहरका युवायुवतीहरू विभिन्न पार्क तथा मन्दिरहरूमा भेट नै गफगाफमा समय बिताउँछन्, तर जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे युवायुवती कसरी रमाइलो गर्छन् होला ?यो जिज्ञासा मेट्न दुई वर्षसम्म विभिन्न समयमा फिरन्ते राउटेसँग साक्षात्कार गर्ने क्रममा केही रमाइला प्रेम प्रसंग अगाडि आए । अन्य समुदायमा जस्तै राउटे युवायुवतीहरू पनि आपसमा भेटघाट र रमाइलो गर्छन्। भेटघाटका लागि टाढै जानुपर्ने अवस्था नभए पनि बसोबास गरेकै स्थानमा एक्लै भेटेर कुराकानी गर्छन् । मस्केर कुरा गर्छन्। जंगलमा दाउरा लिन जाँदा, टहरा बनाउने काम गर्दा अनि चाडपर्वमा नाचगान गर्दा पनि उनीहरू भेटघाटको तालमेल मिलाउँछन्। राउटेहरूले सामान्यतः नुहाउन मन नगर्ने भए पनि युवतीहरू नुहाएर सफा हुन्छन्, सकेसम्म सिँगारपटार गर्छन्, उपलब्ध गहनामा ठाँटिन्छन्।
‘मह दिएर खुसी पारेपछि बुहारी पाइने सम्भावना बढी हुन्छ। शाहीका अनुसार ‘उपहार स्वीकार गरेपछि छोरी दिनुपर्ने हुन्छ। विवाह पक्कापक्कीजस्तो हुन्छ। ‘ विवाहमा केटा पक्षले केटीलाई गहनाहरू दिने चलन हुन्छ। सिल्पटका चुरा, कानमा रिङ, पोतेजस्ता गहना र सम्भव भए एकसरो नयाँ कपडाले दुलहीलाई सिँगारिन्छ।विवाहपछि सुहागरात कहाँ कसरी मनाउँछन् त रु ‘मिल्यो भने छुट्टै छाप्रो बनाएर बस्छौं। जंगलतिर एक्लै काठ काट्न र सिकार खेल्न जान्छौं’ राउटे युवती मैना शाहीले लजाउँदै भनिन्— ‘केही दिन रमाइलो गर भनेर सबैले छोडिदिन्छन्। परिवार र मुखियाले पनि केही काम लगाउँदैनन्।’ केटाकेटीले आपसमा मन पराएपछि बुहारी माग्न जाने, विवाहको मिति तय गर्ने र सानोतिनो भोज गरेर विवाह गर्ने चलन छ। भोजका रूपमा उनीहरू भात, मासु र जाँड बनाउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस ! यी चार राशि भएका मानिसहरू, जस्लाइ मनै पर्दैन कसैको साथ । जानीराख्नुहोस्
४. कन्या राशि: यी राशी भएका मानिस लजालु स्वभावका हुन्छन किनकि यो राशिमा ग्रह नक्षत्रको धेरै प्रभाब पर्छ । यिनीहरुलाई आफ्नै दुनियामा मस्त रहन मन पराउछन्। यी राशि भएका व्यक्तिलाई आफ्नो घर बाहेक अन्त बस्न मन पर्दैन । एजेन्सी
यो पनी हेर्नुहोस्>>> शास्त्रका अनुसार यी ३ राशि भएका पुरुषलाई पाउन मरिहत्ते गर्छन् युवतीहरू… जानिराख्नुहोस्